ukutyala kooVimba-Funda ukuRhweba
I-cryptocurrency ilapha ukuze ihlale: Umphathi we-IMC
UMongameli kunye ne-CEO ye-Columbia Investment Management Company (IMC), uKim Lew, uphawula ukuba ishishini le-cryptocurrency lingaphezulu kwento abantu abaninzi abacinga ngayo kwaye eli shishini "Ngokucacileyo apha siza kuhlala apha."
Isigqeba solawulo lotyalo-mali sakhanyisa izimvo zakhe kumandla otyalo-mali kwi-cryptocurrency kudliwanondlebe ne-Bloomberg Wealth, eqaphela ukuba eli shishini lineendlela ezininzi ezinokubhekisa kuzo. U-Lew wathi:
Zininzi iindlela ezahlukeneyo esinokuhamba ngazo. Kukho ii-solidcoins, kukho i-NFT's… kukho nje i-blockchain, iileya ezahlukeneyo- abantu bayisebenzisela izinto ezininzi ezahlukeneyo. ”
Uye waphawula ukuba ngaphandle kobutyebi obunokwenzeka, i-niche eqinisekileyo eya kuzalisekiswa yimveliso ye-cryptocurrency kwixa elizayo ihlala iyimfihlakalo. Umphathi we-IMC wongeze wathi:
“Ndiyacinga, kucacile ukuba ilapha ukuhlala, ndicinga ngokucacileyo, izakudlala indima… ayicacanga ukuba izakudlala eyiphi indima. Kithina, kubalulekile ukuba senze into encinci, ukuze siqiniseke ukuba siyalandela, siqiniseke ukuba sinobudlelwane nabantu abaza kuphuhlisa ubungcali, kwaye singabunyusa [obo] buchule ukuze sithathe isigqibo malunga nendlela emasihambe ngayo. ”
Ngaphandle kwembono yakhe ethembisayo ngomzi mveliso, u-Lew uqaphele ukuba i-IMC ayibambeleli ngoku, njengoko kunjalo, izama ukunqanda ukungazinzi kwintengiso. U-Lew wachaza ukuba:
“Uyazi ukuba kuninzi ukungazinzi, kukho umngcipheko omninzi, ayisiyonto ekufuneka sihlawulwe ngayo ngoku… kodwa ngokuqinisekileyo sinesakhono– kuba singabatyali-mali bexesha elide- ukuphonononga iindlela ezintsha . Kwaye i-cryptocurrency yenye yazo. ”
Icandelo lezemfundo elithatha umdla kwi-Cryptocurrency
I-IMC yinkxaso yeYunivesithi yaseColumbia enoxanduva lokulawula iiasethi zeziko lemfundo. Oko kwathethi, amabango kaLew abonisa ukukhula komdla wotyalo mali cryptocurrency ukusuka kumzi mveliso wemfundo.
U-Lew uqaphele ukuba uvulelekile ekwabeni ezinye iimali kwi-crypto space njengoko ibonisa indawo echazwe ngakumbi eluntwini.
tags Cryptocurrency, utyalo, iindaba